यता किन छैन नागरिक आन्दोलन ?
वरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल- - -
बलात्कार होस् कि हत्या, ती जघन्य अपराध हुन् । अपराध त अपराध नै हुन्छ, अपराधीलाई दण्ड दिने कानुनले हो । कानुनमाथि राजनीतिक दबाब प¥यो, ढिलासुस्ती भयो भने जाग्ने र जगाउने नागरिक समाजले हो । नागरिक आन्दोलनले हो ।
गंगामाया अधिकारी नेपालको कानुनका लागि, नागरिक समाजका सामु उभिएको यक्ष प्रश्न होइन र ?
४० वर्ष मुनीका महिलाहरुलाई मातापिता र वडाको सिफारिस नभए विदेश जान रोक लगाउने कुरा के बाहिर आयो, नागरिक समाजले सडक र सत्तालाई घेर्न पुग्यो । निर्मलादेखि भागिरथीसम्मको बलात्कार र हत्यामा कारवाही हुनुपर्छ भनेर नागरिक समाजले यतिबेला सडकमा चर्को आन्दोलन गरिरहेका छन् । ती सबै आन्दोलनमा प्रत्येक नेपालीको नैतिक समर्थन छ, सक्नेले भौतिक साथ पनि दिएका छन् ।
आजका युवा महिला गोठमा बाँधेका गाई होइनन् । तिनले अब कुनै प्रकारको निरंकूशता सह्य छैन भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । युवा महिलामा देखिएको जागरण जायज छ, यस्तै जागरणले हो असमानतालाई समानतामा रुपान्तरण गर्ने । यो आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन छ ।
छोरा कृष्णप्रसादलाई मारियो, न्याय पाऊँ भनेर आमाबाबु अनसन बसे, बाबुले अनसनमै ज्यान गुमाए । यी आमा गंगामाया अधिकारी न्याय नपाएरै मर्छुक्यारे भनेर अनसनमै छिन् । यो अन्याय होइन ? यो अन्यायमा, नेपालको शासन, सुशासन र न्याय मरेको यो दर्दनाक दृश्यले युवाहरुलाई किन पोलेन ? नागरिक समाज र अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले समेत वक्तव्य फालेर ६ वर्षदेखि सुतेर बस्न मिल्छ ? यस विषयमा सिंहदरवार घेर्नलाई कसले रोक्यो ? कतै नागरिक समाज भन्ने जिनिस पनि पार्टीकरण भएको त होइन ? होइन भने न्यायकरणमा देखिएन त ?
सत्ताका लागि विशाल विशाल जनसभा भइरहेका छन् । जनतालाई पार्टीको समर्थनमा उतार्ने अभ्यास जोडतोडले भएका देखिन्छन् । न्याय, नीति, लोकजीवनमा ल्याउने परिवर्तनको कुनै योजना देखिन्न, खोई खाका भनेर कुनै नागरिक सोध्दैनन् ।
हुँदा हुँदा मर्दा आर्यघाट नै लैजानु, एकनम्बर घाटमै जलाउनु भनेर भन्नेहरु त्यही पशुपतिनाथलाई गाली गर्न थालेका छन् । राजनीतिक मञ्चबाट धर्मको कुप्रचार किन भइरहेको छ ? पहिले जातिको कुरा गर्नेहरुको यो अर्को साजिस त होइन ? प्रश्न यत्ति छ, समानता र न्याय खोज्ने युवा महिला पुरुष दुबैले विधिको शासन पनि खोज्नुप¥यो ।